अमिताभ र जयाको यतिका सम्पत्ति ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
अमिताभ र जयाको यतिका सम्पत्ति ?
अभि‍नेत्री एवम् सपा सांसद जया बच्चनको नाम सबसे धनी राज्यसभा सांसदको लिस्टमा पर्छ । अभिनेता अमिताभ र जयाको 1,000 करोड़ भारतिय रुपैया बराबरको संपत्ति रहेको छ । यस सम्पत्तिमा करोडौको ज्वलरी समावेश रहेको छ । अमिताभको एक नानो कार र ट्राक्टर पनि रहेको छ ।
जया बच्चनको २६ करोड़ भारतिय रुपैयाको गोल्ड र गरगहना रहेको छ । अचम्मको कुरा के छ भने जयाको भन्दा अमिताभको गहना बढी किम्तिको रहेको छ । अमिताभको साथमा 36 करोड़ भारतिय रुपैयाको ज्वलरी रहेको छ भने जया संग 26 करोड़ भारतिय रुपैयाको ज्वलरी रहेकोछ । बच्चन दंपतिको साथ करीब 13 करोड़ भारतिय रुपैयाको 12 गाडी रहेको छ ।
अमिताभ संग9लाख भारतिय रुपैयाको एक पेन पनि रहेको छ । बच्चन दंपति संग करीब4करोड़ भारतिय रुपैयाको घंडी रहेको छ । अमिताभको 3.4 करोड़ भारतिय रुपैयाको घंडी रहेको छ भने जबकि जयाको 51 लाख भारतिय रुपैयाको घंडी रहेको छ ।
यि जोडीको फ्रांसको ब्रिगनोगन प्लेज मा 3,175 वर्ग मीटर को रेजिडेंशियल प्रोपर्टी पनि रहेका छ । भारतमा उनिहरुसंग नोएडा, भोपाल, पुणे, अहमदाबाद, गांधी नगर मा प्रोपर्टी रहेको छ । बाराबंकी को दौलतपुर इलाकामा 5.7 करोड़ भारतिय रुपैया मूल्यको3फ्लाट रहेको छ । जयाको लखनऊको काकोरी इलाकामा 2.2 करोड़ भारतिय रुपैयाको 1.22 हेक्टेयर कृषि भूमि रहेको छ ।